Tetikasan’ny Global Voices Mitsapa ny “Vaovao Faikany” · Global Voices teny Malagasy
Tetikasan'ny Global Voices Mitsapa ny “Vaovao Faikany”
Voadika ny 21 Avrily 2017 17:10 GMT
Fanavaozana farany ny lahatahiry : 14 Aprily 2017
Ity fitrandrahana ny “vaovao faikany” ity dia anisan'ny fandraisana an-tanana lehibe fanatrarana vaovao diso na mamitaka eo amin'ny tontolon'ny gazety sy ny media sosialy. Ny fanaovanay fitsapana dia enti-manazava ny tsirim-pahalalana sy enti-manavatsava ny halehibeny manerantany.
Mankany amin'ny fanazavana
Miovaova ny hevi-tenin'ny “vaovao faikany”. Ny nifantohanay tamin'ny voalohany dia niompana tamin'ireo vaovao ahiahiana ho ankosotra. Nofaritanay ho torohay ankosotra ireo vaovao diso tiana aseho ho marina, na izany ao anatin'ny fikambanan-gazety, na amin'ny media sosialy. Raha ny tanjon'ity fanandramana ity, nifantohanay ireo fisiana antserasera te-hiseho ho loharanom-baovao ara-dalàna. Hita ao ohatra ny famokarana mpanangom-baovao matihanina sy tsy matihanina, ary amin'ny ankamaroany, mampanontany tena ihany ireo fitaka niniana natao.
Ireto avy ny sokajy napetrakay – isaoranay ireo mpiara-miasa aminay ao amin'ny FirstDraftNews.com nanome aingam-panahy anay momba azy ireo :
(ankavia miankavanana sy ambony mankany ambany) Tsy fifandraisan'ny lohateny sy ny votoaty (ohatra. lohateny fitaka hotendrena efa tsy misy votoaty na votoaty mamitaka): 8 ; Votoaty diso (sary natao photoshop, zava-misy namboamboarina): 38 ; Votoaty diso (vaovao marina sy sary tena izy saingy tsy misy ifandraisany): 6 ; Fanazavana diso Loharanom-baovao hosoka (hala-tahaka tamin'ny tranonkalan'ny fampahalalam-baovao goavana, kaonty Twitter, sns): 6 ; Esoeso/fandatsana tsy dia mikatsaka ny ho vaovao faikany SAINGY raisina ho matotra sy avoaka indray): 2
Tsy ampy ireo sokajy ireo. Havaozinay miaraka amin'ny fandinihanay ireo tranga samihafa izany. Manampy anay amin'ny fandinihanay ireo olana ara-baovao hafa ny fitsapana ny halalin'ny “vaovao faikany,” izay renesin'ny olona amin'ny fomba samihafa. Araraotinay koa izany hiezahana hanazavana ireo tsirim-pahalalana tahaka ny efitra manako, fampielezana na fandisoam-baovao.
Ny halaliny manerantany
Fantatray fa olana manerantany ny “vaovao faikany”, izany no mahatonga ny fikambanana Global Voices manangona ireo trangam-baovao ankosotra any amin'ny firenena maro araka izay azo atao. Azonareo jerena amin'ity sarintany ity ny fivoaranay :
<a href='https://newsframes.globalvoices.org/investigations/fabricated-news-experiment/’><img alt='Fabricated News Map ‘ src='https://public.tableau.com/static/images/Fa/FabricatedNews-Map5/FabricatedNewsMap/1_rss.png’ style='border: none’ /></a>
Sarotra hamarinina ao anaty fahatokisana ny fiantraikan'ny “vaovao faikany”, satria miara-misy amin'ireo olana hafa miompana amin'ny tsy fivaonany, ny fitongilanana, ary ny fifandirana amin'ny fametrahana izay vaovao lazaina alohan'ny hafa. Saingy arakaraka ny anangonanay ny lahatahiry sy hanatsaranay ny fanontaniana no ikarohanay ireo fitaovam-panadihadiana lahatahiry ahafahanay mahita valiny.
Ny taona hoavy manontolo, handray anjara ny fiarahamonina Global Voices amin'ity fanandramana ity amin'ny alalan'ny fanamarinana, famakafakana ary fanelezana amin'ny vahoaka ny tranga tahaka izany.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany vaovao diso sy namboamboarina izany, jereo ny pejinay Loharanom-baovao. Ireo mpilatsaka an-tsitrapo te handray anjara amin'ny tetikasanay dia asaina hifandray amin'ny ekipan'ny NewsFrames ato.
12 ora izay
13 ora izayAzia Atsinanana